Ciidamada ammaanka Puntland oo fashiliyay qarax la dhigay waddo mashquul badan oo kutaala Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo fashiliyay qarax la dhigay waddo mashquul badan oo kutaala Boosaaso
September 19, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalo xeebeedka Boosaaso. [Sawirka: Maxamed Axmed/Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa shalay oo Isniin ahayd fashiliyay qarax la dhigay waddo mashquul badan oo ay ka ag dhowyihiin goobo ganacsi, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka.
Kadib markii ay ciidamada ka warheleen qaraxyada halkaas la dhigay ayaa inta uusan qarxin waxay ku guuleysteen in ay kahortagaan iyaga oo dadkii iyo gaadiidkii waddadaas isticmaalayay ka saaray kadibna qarxiyay waxyaabihii qaraxa ahaa ee halkaas la dhigay.
Lama oga ilaa iyo hadda cidda qaraxa halkaas dhigtay, balse maleeshiyada Al-Shabaab ayaa horey qaraxyo dad shacab ah ay ku dhinteen uga geysatay gudaha magaalada Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
November 14, 2016 Puntland: reer guuraa ku barakacay abaarta kadib markii uu ka baxay maalkii soofi jirey
October 3, 2016 Puntland oo laga roob doonay iyadoo ay jiraan abaaro
July 17, 2017 Dowladda Hoose ee Garoowe oo bilowday howlgal lagu burburinayo dhismayaal sharci daro ah oo laga dhisay waddooyinka
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari uu burburshay makhaayad kutaala gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso maanta oo Khamiis ah, sida goobjooge uu u sheegay warsidaha Puntland Mirror. “Gaariga oo xawli [...]
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday qandaraaska goobo kuyaala badda oo shidaal laga baarayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah ku dhawaaqday furnaanshaha qandaraaska todobo goobood oo kuyaala badda oo shidaal laga baarayo, sida uu sheegay wasiirka ku xigeenka batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal. Qandaraaska ayaa [...]